Hery Rajaonarimampianina : « Ilaina amin’ny fampandrosoana ny herinaratra » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Ilaina amin’ny fampandrosoana ny herinaratra »
“Ilaina amin’ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny herinaratra”. Io no nambaran’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin’ny ny lahateny nataony nandritra ny fitonkanana tobim-pamokarana herinaratra Symbion Power, teny amin’ny foibem-pamokarana teny Mandroseza, omaly.
Nambarany tamin’izany ihany fa fanamby goavana efa napetraka ny fampitomboana ny famokarana herinaratra eto amin’ny firenena. Maro, hoy izy, no velon-taraina amin’ny fisian’ny delestazy eto amin’ny firenena. Noho izay indrindra, anisan’ny fanamby napetraky ny Fitondram-panjakana ny fametrahana fotodrafitrasa fototra, tsy maimaika ary tsy tandrametaka, hialàna amin’ny delestazy. “Izany no ahazoan’ny vahoaka rehetra misitraka herinaratra ary misitraka izany ihany koa amin’ny vidiny zakan’ny sarambabem-bahoaka. Tena tanjona dia ny fametrahana ny angovo azo havaozina, izay sady miaro ny tontolo iainanana, mora vidy ary azo haparitaka manerana ny Nosy. Efa miroso amin’izany isika ary ny Fitondram-panjakana sy ny Filoham-pirenena dia mandray ny fepetra rehetra sy ny fanampahan-kevitra rehetra izay ahafahana miroso amin’izany fanatanterahana ny fanamby izany”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Ankoatra izay, nambarany fa tsy mora ny lalana nolalovana vao tonga tamin’ny fahazoana izao fotodrafitrasa izao. Voalaza hatrany fa tanteraka ny fanamby noho ny fisian’ny finiavana, ny fahavononana ary fifandresen-dahatra.
Etsy andaniny, somary nanipy teny ho an’ireo tsy matahotody ka nampitontongana ny orinasa nasionaly mpamokatra herinarata, Jirama, ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nambarany mantsy fa fanavaozana ireo fitaovana na milina mpamokatra herinaratra mitondra ny marika Wartsila no nataon’ny Fitondram-panjakana miaraka amin’ny orinasa Symbion Power fa tsy nametraka fitaovana vaovao na/sy nanorina mihitsy akory.
Araka izany, nanambara ny Filoham-pirenena fa mampieritreritra ihany ny zavamisy teto amin’ny firenena satria efa ny taona 2008 no nametrahana ireo milina vaovao ireo saingy nihodina efa-taona na dimy taona dia nisy fahasimbana. “Azo lazaina fa mpanjakan’ny milina mpamokatra herinaratra ny Wartsila ary rehefa voakarakara tsara izy ireny, maharitra hatramin’ny 40 taona, ho an’ireo firenena hafa. Noho izany, nisy ny tsy fandraisana andraikitra tamin’ny fikarakarana sy ny fanavaozana hatramin’izay, fa naninona?”, hoy izy.
Manambara izany fa nisy ny fanodikodinana sy fihinanam-bola tao amin’ny orinasa Jirama tamin’ny fitondran-dRavalomanana sy ny tamin’ny fitondrana Tetezamita. Izay no tena nampitontongana ity orinasa nasionaly mpamokatra herinaratra ity.
Ankoatra izay, nisaotra ny orinasa Symbion Power izay nahavita nanarina ireo milina mpamokatra herinaratra ny Filoham-pirenena.
Roa sisa dia tapitra ny 7 andro amin’ny hetsika « coup de poing » hifanotronan’ny kaomina Antananarivo Renivohitra sy ny Samva. Tao anatin’ny dimy andro nanaovana ny hetsika dia tsy hita izay vokany nentina, fa ...Tohiny